Dzidzo yatinopa - Central Language School, Cambridge
Central Language Chikoro chinopa General Chirungu, Intensive English, Chikamu-Nguva uye Zvidzidzo zvekuongorora. Tsanangudzo pane imwe neimwe yezvikoro izvi inogona kuwanikwa uchishandisa menyu kurudyi.
Tinogamuchira vadzidzi gore rose uye tinopedza nguva yeKrisimasi chete.
Nzira Yako uye nguva yako
Nzira yako inogona kuvimba nehuwandu hwako, saka tinokupa kuongororwa kwekuiswa kwepamusoro paunosvika. Iwe unogonawo kutora iyo Cambridge Shona test, iyo ichakuudza kuti chii chaunogona kuongorora chingakwanisa kugadzirira. Iyi ingongova mutungamiri, saka tichakukurudzira iwe paunotora chikoro.
Yedu nguva yakazara yedzidzo inodanwa General English (15 maawa masikati purogiramu yevhiki) kana Intensive English (21 maawa masikati pagwaro). Zvidzidzo mangwanani oga oga kubva kuMuvhuro kusvika kuChishanu, 09: 30 kusvika 13: 00 nekofi-break at 11: 00. Kana ukasarudza Intensive English kunewo makirasi musi weChipiri, Chitatu uye China masikati pakati pe14: 00-16: 00.
Isu tinopawo imwe yakasiyana-siyana Chikamu chemazuva: panguva ipi zvayo yegore iwe unogona kudzidza pamusoro pedu Afternoon Course, iyo ndiyo masikati chikamu cheIntensive English, sepamusoro. Pane dzimwe nguva dzegore, tinopa chikamu-nguva Vanotanga mangwanani Mangwanani musi weChishanu, Chitatu uye China kubva ku09: 30 kusvika ku11.00.
Kune mamiriro emagariro emasikati kana manheru mabasa emumwe wevadzidzi vedu, achipa maitiro akawedzerwa muChirungu chakataura.
Iwe unogona kutanga paMuvhuro chero upi zvake (kunze kwemazororo ehurumende) kwehuwandu hwevhiki imwechete. Vadzidzi vakawanda vanoverenga mavhiki e4-12. Vamwe vadzidzi vanodzidza kusvikira kune rimwe gore. Tinogona kukupa mazano pamusoro pehurefu hwemazano anodiwa kuti uwane zvinangwa.
Yakawanda yekirasi yakakura ndeye 10, asi kazhinji iripo pakati pe5 ne7 vadzidzi pakirasi. Paunosvika pachikoro iwe uchaita Test Placement kuti uongorore nzvimbo yako. Iwe uchazoiswa mukirasi maererano neshoko rako re grammar, mano ekutaura uye zvinangwa zvako. Kushandisa mabhuku akasiyana-siyana iwe uchadzidza Chirungu kuburikidza nemhando dzakasiyana-siyana dzemashoko nekusimbiswa pakutaurirana kukurukurirana. Izvi zvinosanganisira vaviri-basa, kukurukurirana uye kutamba. Iwe uchange uine mukana wekuwedzera izwi rako uye kusimbisa ruzivo rwako rwegirama.
Idzi General English ndiyo maawa 15 pavhiki mangwanani oga oga anotanga pa 09: 30 uye kupedzisa pa 13: 00 ne...	Read More
Vadzidzi vanoshuva kupedza nguva yakawanda vachidzidza Chirungu vanogona kunyoresa muIntensive English course (maawa 21 pavhiki)....	Read More
KUSANGANA NOKUDZIDZA Unogona kutanga yako Masikati Masikati paChipiri chega mushure mekunge watora muedzo wokuisa. Mangwanani...	Read More
Vako vadzidzisi vanozokupa mazano pane zvakanyanya bvunzo iwe. Iwe unogona zvakare kutora Cambridge yeChirungu bvunzo. kuti...	Read More
Tora bhurocha redu
Ona bhurocha redu - tora kuti uite